Ọ dịghị mmachi ugbu a na-ege ntị Spotify music site Spotify on Windows ekwentị
Dị ka iOS na gam akporo igwe, Windows ekwentị nwekwara e ẹkenam ka Spotify music ngwa. The ngwa na-enye ohere Windows ekwentị ọrụ na-enwe music si Spotify n'oge ọ bụla na n'ebe nile ha na-aga.
Part 1.Features nke Spotify windows ekwentị ngwa
Part 2.How iji Spotify ngwa na Windows ekwentị
w Part 3.Listen ka Spotify music offline free on windows ekwentị site TunesGo
Atụmatụ nke Spotify windows ekwentị ngwa:
Windows ekwentị ọrụ nwere ike na-ege ntị music on Spotify na iji Spotify ngwa n'ihi na windows ekwentị. The ngwa ohere ọrụ ịnweta ụwa nke music n'ebe nile ha na-aga. Ọrụ ike ịmepụta listi ọkpụkpọ, hazie ha listi ọkpụkpọ na-ege ntị music site albums ma ọ bụ artists. The ngwa nwekwara-atụ aro listi ọkpụkpọ n'ihi na ọrụ ịhọrọ site na ka ona ha ọnọdụ.
The mara mma e mere ngwa dị mfe ịnyagharịa na nwere ihe arụmọrụ. Ọ nwere ma free na adịchaghị ndebanye aha maka ọrụ ịhọrọ site na. N'ụzọ doro anya, adịchaghị ndenye aha nwere ihe atụmatụ karịa free ndenye aha.
The free ndenye aha ohere ọrụ na-ege ntị music-enweghị ike na ibudata maka offline n'ige ntị, ike ha onye playlist, egbochi ndị ọnụ ọgụgụ nke track skips ka naanị 6 skips kwa awa na bombards ọrụ na ọtụtụ mgbasa ozi.
The adịchaghị mma-enye ọrụ ịzọpụta music maka offline n'ige ntị, akparaghị ókè ọtụtụ track skips, ikike ike na hazie listi ọkpụkpọ, ikike na-ege ntị ọ bụla song, ọ bụla na-ọ bụla na ngwaọrụ.
Ka ọ bụla ọzọ ihe, Spotify ngwa na-nwere ya uru na ọghọm
• Gee egwu n'ebe nile ị na-aga
• Mara mma interface: The ọhụrụ ọchịchịrị interface na-eme ka ngwa mfe ma mara mma
• Easy navigation: Easily achọpụta na music ị na-achọ ekele na mfe navigation nke ngwa.
• Download music ige ntị mgbe offline
• Social: Ọrụ nwere ike ịmepụta playlist na-eso ndị ọrụ ndị ọzọ na Facebook na Twitter
• Sound àgwà: The ngwa nwere ihe ndị magburu onwe ụda àgwà.
• Ọ dịghị nkwa: Ọrụ nwere ike ịkagbu ha adịchaghị ndenye aha n'oge ọ bụla ha na-amasị
• The free version nwere nza mgbasa ozi nke nwere ike ịbụ nnọọ manụ.
• The free version adịghị ekwe ka ndị ọrụ na-ezipụta songs na-egwu
• ọrụ ike dezie song kwụ n'ahịrị
• Ọ bụ nanị 6 track skips kwa awa na-ekwe maka free ọrụ
• Free ọrụ enwe nanị ole na ole atụmatụ nke Spotify ngwa
Maka naanị $9.99, ọrụ ike nwere ohere na adịchaghị atụmatụ nke Spotify nke na-agụnye na-akparaghị ókè track skipping, offline na-ege ntị, ahaziri playlist na ọtụtụ ndị ọzọ.
2.How iji Spotify ngwa na Windows ekwentị
Ya mere, ị ebudatara Spotify maka Windows ekwentị na ugbu a, ihe? Mepee ngwa na-nbanye gị nkọwa. Ị ga-abịa gafee ihe dị ka foto dị n'okpuru ebe.
Search mmanya-enye gị ohere iji chọọ music, nka na albums.
The 'listi ọkpụkpọ' ngalaba e dere ihe na listi ọkpụkpọ i zọpụta ma na nke ugbu a ngwaọrụ ma ọ bụ na ngwaọrụ ọzọ. Iji nweta gị playlist, dị nnọọ enweta na 'listi ọkpụkpọ' ngalaba na ị ga-ahụ ndepụta ọkpụkpọ gị depụtara.
'Play kwụ n'ahịrị' nwere ndepụta nke music i queued na-egwu si dị iche iche listi ọkpụkpọ.
'Ndị mmadụ' e dere ihe na ndepụta nke ndị i kwukwara na Spotify. Ọ bụrụ na ị nwere enyi na Spotify, ị nwere ike ele ha listi ọkpụkpọ, ihe ha na-ugbu a na-ege ntị na ihe ha mmasị songs are.'What ọhụrụ 'e dere ọhụrụ music on Spotify.
'Ugbu a na-akpọ'-egosi na ị na music ị na-egwuri egwu na oge.
Ọ bụrụ na egwu na-akpọ, i nwere ike isi azụ ka ndabere nke ekwentị gị na ya ga-anọgide na ebre-enweghị nkwụsị.
3. Gee Spotify music offline free on windows ekwentị site TunesGo
N'ihi na ọrụ na-adịghị enwe ohere na internet oge niile ma ọ bụ ndị ọrụ ike imeli kwa ọnwa adịchaghị ndenye aha na-achọ na-ege ntị music si Spotify, e nwere bụ ihe ngwọta maka gị. Ị nwere ike ugbu download music si Spotify nri n'ime gị na kọmputa na mgbe nyefee ndị music na ekwentị gị ọsọ ọsọ na mfe. A nwere ike mere iji Wondershare TunesGo.
Wondershare TunesGo bụ a software nke nwere otú ọtụtụ atụmatụ. Ọ na-ekwe ọrụ ibudata music ọ bụla na music gụgharia saịtị ma ọ bụ ngwa na-enweghị na-aga site ọ bụla hassle. Ọ na-enye ohere ọrụ ibudata vidiyo si na nkwanye saịtị dị ka YouTube, Vimeo na ọtụtụ ndị ọzọ.
TunesGo akwụsịghị na dị nnọọ nbudata music na vidiyo; ọ na-akwado nyefe nke music site na otu ekwentị ọzọ nakwa na ihe ọ bụla na ekwentị gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na-enweghị adịkwa ọ bụla nke gị data.
Ka ibudata music si Spotify iji TunesGo, na-eso nzọụkwụ n'okpuru.
Download na wụnye TunesGo
1) .Open Spotify na-egwu music ịchọrọ ibudata.
2). Onyeisi-awụ ọsọ n'ugwu Go na Pịa na-edekọ emi odude ke aka ekpe n'akụkụ nke software.
3) .Pịa on rec n'etiti TunesGo na ngwa ngwa-egwu music ịchọrọ ibudata site na Spotify.
4). Mgbe ị na-mere ndekọ, pịa na nkwụsị bọtịnụ na n'etiti TunesGo.
5) .Iji chọta gị music click on Kọrọ na n'aka-ekpe n'akụkụ nke TunesGo.
6). Azọpụta gị music site na ịpị checkbox nke track ị chọrọ ịzọpụta na pịa bupu ke n'elu.
7). Họrọ ọnọdụ na ị chọrọ ịzọpụta gị ebudatara Spotify music na pịa ok.Your music na-echekwa na nwere ike gee ntị ma ọ bụ zigara ọ bụla ekwentị na oge obula ma ị bụ online ma ọ bụ na-anọghị n'ịntanetị.
Nyefee music ka Windows ekwentị
1). Open TunesGo na pịa music wee pịa na Tinye.
2). Họrọ ọnọdụ nke music faịlụ ịchọrọ ịgbakwunye mbubata music ka TunesGo. Na nke a, họrọ ọnọdụ nke Spotify music Ị na-azọpụta mbụ.
3). Jikọọ gị Windows ekwentị na pịa "Nyefee Music Site iTunes ka Ngwaọrụ".
4). Họrọ music faịlụ ị chọrọ nyefee na pịa "Nyefee".
Chere maka usoro ga-agwụ agwụ na ego na ekwentị gị. Ị ga-ahụ na ị na-ọma-agafere music si Spotify gị Windows ekwentị nkeji ole na ole iji ndị a nnọọ mfe ma dị mfe nzọụkwụ.
The Ultimate Guide nke Samsung PC Share Manager
> Resource> Windows> Ọ dịghị mmachi Ugbu a na-ege ntị Spotify Music site Spotify on Windows Phone